Wasiiro ka tirsan M/Hirshabeelle oo maanta gaaray Deegaanadii lagu dagaalamay ee Hiiraan. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Home / Somali News / Wasiiro ka tirsan M/Hirshabeelle oo maanta gaaray Deegaanadii lagu dagaalamay ee Hiiraan.	Wasiiro ka tirsan M/Hirshabeelle oo maanta gaaray Deegaanadii lagu dagaalamay ee Hiiraan.
June 19, 2017	Matabaan-KNN- Wafdi ka kooban Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Maamulka Hirshabeelle ayaa maanta gaaray Degmada Matabaan ee Gobalka Hiiraan oo ay tuulo hoos timaada ku dagaalameen labo maleeshiyo beeleed oo halkaasi wada daga.
Wafdigaan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaarada dib u heshiisiinta ee Maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) waxayna hada ku sugan yihiin Deegaanka Baanyaaley ee Gobalka Hiiraan.
Dagaalkii ka dhacay deegaankaasi ayaa waxaa ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii dagaalamay iyo dad kale oo rayid caruur iyo Haween ah.
Mas’uuliyiinta Hirshabeelle ayaa sheegay in aysan ka soo laaban doonin deegaanka Baanyaaley ee Gobalka Hiiraan ilaa ay xal usoo helaan xiisadda taagan ee maleeshiyada ka dhaxeyso.